Star Power-kii 90-maadkii: Waa Kuwee 3-Atoore Sanadii 1996 Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa | Filimside.net
Home » Box Office » Star Power-kii 90-maadkii: Waa Kuwee 3-Atoore Sanadii 1996 Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa
Star Power-kii 90-maadkii: Waa Kuwee 3-Atoore Sanadii 1996 Bollywood-ka Ugu Awooda Badnaa
Waxaan inta badan dhawaanahan ka hadalnaa awooda atoorayaasha xidigaha ah ee xiligaan filimada gaddi karaan soona daabacdo shabakada Boxoffice India.
Balse si aan xeen daabka u balaarino shabakada Filimside waxay isku hawshay dhalinta Web-keena ku xiran inaan uga faa’iideeno sawir sax ahna awooda Super Star-da ka siino 28-sano ee ugu dambeesay.
Sidaa darteed Star Power-kii ama awooda atoorayaasha Bollywood-ka sidii ay ahayd 90-maadkii ayaan ku laaban doonaa anagoo soo qaadan doono sedexdii atoore ee sanad walbo ugu awooda badneyd.
Sanadii 1996 Iyo 3-Atoore Ugu Awooda Badneyd Bollywood-ka:
1. Shah Rukh Khan: HIT weyn ma uusan sameynin 1996 kaliya filimka Army ayaa u guuleestay, Dhibacaha Uu Awood Ahaan Heestay 825-dhibcood.
2. Akshay Kumar: HIT-ka ugu weyn uu sameeyay 1996 wuxuu ahaa Khiladiyon Ka Khiladi, Dhibacaha Uu Awood Ahaan Heestay 745-dhibcood.
3. Aamir Khan: HIT-ka ugu weyn uu sameeyay 1996 wuxuu ahaa Raja Hindustani, Dhibacaha Uu Awood Ahaan Heestay 715-dhibcood.
Sharaxaad Guud Bollywood-ka Wixii Ka Dhacay 1996:
SRK ayaa sii watay hogaamintiisa awooda Bollywood-ka wuxuuna ku fakaday dhibcahii waalida ahaa ee u 1995 aruursaday balse 1996 kaliya filimka Army ayaa u guuleestay.
Balse Aamir Khan ayaa Boxoffice-ka ku qabsaday filimkii All Time Blockbuster-ka noqday Raja Hindustani sidoo kalena Akshay Kumar awoodiisa safka hore wuu sii xajistay.
Shahrukh Khan kaliya filimkii Army ayaa guul u gaaray laakiin awoodiisa dhibcaha 1995 u aroortay awgeed ma jirin xidig kale oo ka dhibco badnaaday taasina waxay sababtay Star Power-ka fanka inuu isaga sii hogaamiyo.
Akshay Kumar xidigaan wuxuu Bollywood-ka ku qasbaday Khiladiyon Ka Khiladi oo noqday filimkii ugu bilaabashada wanaagsanaa 1996 sidoo kalena Akki awood weyn ku helay iyo aqoonsi caalami ah.
Aamir Khan wuu soo rogaal celiyay weliba si adag madaama 1995 uu Blockbuster Rangeela sameeyay 1996 ayuu siweyn usoo karaartay qaatay asigoo Hit-kii ugu weynaa sameeyay Raja Hindustani oo All Time Blockbuster noqday wuxuuna ku helay Star Power weyn darajada Superstar-nimo ayuuna ku gaaray filimkan.
Sunny Deol ayaa soo laabasho adag sameeyay 1996 asigoo la yimid labada filim ee Big Hits-ka noqdeen Jeet & Ghatak waxaana ka hartay abaartii ku dheeratay ee 1994 iyo 1995 ku habsatay, Star Power-kiisana wuxuu ahaa 710-dhibcood.
Govinda waa qasab inuu sanad walbo Big Hit sameeyo wuxuuna 1996 la yimid filimkii hirgalay Saajan Chale Sasural taasi oo cadeesay in awoodiisa marnaba is dhimeyn dhanka Boxoffice-ka, Star Power-kiisana wuxuu ahaa 710-dhibcood.
Ajay Devgn isagana labo filim ayaa guul weyn u gaareen waxayna kala ahaayeen Jaan iyo Diljale taasi oo Star Power-kiisa dhibco ahaan gaarsiisay 700-dhibcood kor ayuuna soo kacay.
Salman Khan isagana awood buuran ma laheyn balse wuxuu ahaa xidig la jecel yahay waxaana u gadmay filimkii Jeet ee uu caawiyaha ka ahaa Star Power-kiisana wuxuu ahaa 660-dhibcood
La Soco 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badnaayeen Star Power Ahaan 1997 Iyo Wixii Dhacay Xiligaas
Haddii aadan Aqrisanin Maqaalkii 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badan 1990 Fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan Aqrisanin Maqaalkii 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badan 1991 Fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan Aqrisanin Maqaalkii 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badan 1992 Fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan Aqrisanin Maqaalkii 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badan 1993 Fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan Aqrisanin Maqaalkii 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badan 1994 Fadlan RIIX HALKAAN
Haddii aadan Aqrisanin Maqaalkii 3-Atoore Bollywood-ka Ugu Awood Badan 1995 Fadlan RIIX HALKAAN